12 April 13- Twi online
Friday Sermon: Be Watchful of your Trusts and Covenants - 12th April 2013 - Twi Translation
ƐFIADA NYAMESƐM: Oforesuo Bosome da a ɛtͻ so 12, wͻ afe 2013
(Summary of Friday sermon – 12th April 2013 – Ashanti Twi Translation)
YƐ AHWƐYIE WƆ WO GYIDIE NE BƆHYƐ SO.
Hadhrat Khalifatul Masih kenkanee saa kyɛfa wei ɛde hyɛɛ ne Fiada Nyamesɛmka no ase:
“Ampaara sɛ, Allah hyɛ mo sɛ momfa awowasideɛ no a wͻde ahyɛ mo nsa no ma awuranom a ɛyɛ wͻn dea na ɛfata wͻn, na sɛ mobu nnipa ntɛm atɛn a, monfa pɛpɛɛpɛyͻ mu atɛn tenenee. Na esi pi sɛ deɛ edi mu paa na Allah de afutuo ama mo! Allah deɛ Ɔte biribiara na Ɔhunu adeɛ nyinaa” (Sura Al-Nisa 4:59).
Sɛdeɛ Jama’atfoͻ dodoͻ noara nim no, saa afe wei yɛ afe a yɛto aba wͻ mu wͻ Jama’at no mu. Yɛbɛto aba ayi Ameer, Sadr ne wͻn a wͻwͻ dibrɛ a yɛto aba no wͻ mfie miɛnsa biara. Baabi wͻ hͻ a abatoͻ no ahyɛ aseɛ. Majlis e Intikhab a ɛwͻ Jama’at akɛseɛ mu no a wͻnom na wͻyi nkurͻfoͻ na wͻma wͻn dibrɛ no a, nka ɛho hia sɛ yɛbɛto aba sɛdeɛ ɛbɛyͻ na wͻadi Jama’at no anim wͻ ne kwan so, na ɛho nso hia sɛ yɛbɛyi obi a wͻsɛ fata sɛdeɛ bɛyɛ na wͻbɛdi dibrɛ no kwan pa soͻ. Nokorɛ ne sɛ saa nsɛm yi ho hia, nti na Kuraan Kronkron no twe yɛn adwene kͻ so. Wͻkyerɛkyerɛ mu nipa su a ɛwͻ sɛ yɛyi wͻn na yɛma wͻn dibrɛ no. Ɛsan nso kasa kyerɛ wͻn a wͻwͻ dibrɛ no kyerɛ wͻn sɛ ɛnnyɛ ɛno ara ne no sɛ wobɛnya dibrɛ bi, na ɛwͻ sɛ yɛyi dibrɛ no asɛdeɛ na sɛ yɛanyɛ n’asɛdeɛ a na yɛretwetwe Onyankopͻn abufuo aba yɛn so.
Wͻ kyɛfa a wͻkenkaneɛ no mu no, asɛdeɛ a adi kan no ne gyidie, ɛno nti yɛn to aba nyi wͻn a wͻyɛ wͻ y’ani so. Yɛn hwɛ sɛ wͻsɛ fata sɛ wͻma no dibrɛ no anaa sɛ ɛnni kwan sɛ wͻde ma no. sɛ asodie no yɛ kɛseɛ a ɛno na mokabom na mo de mo adwene kyerɛ ba Khilafa a ͻwͻ hͻ saa aberɛ no. Ne dodoͻ noara ho hia sɛ mo dwene ho na mo bͻ mpaeɛ fa ho. Ɛnni kwan sɛ yɛto aba no sɛ nipa korͻ no bɛn wo anaa sɛ ͻyɛ wo adamfo. Onyankopͻn mmu wͻn a wͻwͻ dibrɛ no ankasa atɛn, na wͻn a wͻtoo aba no nso bɛyi wͻn ho ano sɛ deɛn nti na w’anto aba no yie.
Saa kyɛfa wei nso twe yɛn adwene kͻ so sɛ, sɛ obi nni nimdie pii fa wͻnom a wͻbɛto aba ama wͻn no ho a, ɛneɛ ɛwͻ sɛ yɛbͻ mpaeɛ kyerɛ Onyankopͻn sɛ wͻma yɛn nto aba no ma deɛ ͻyɛ wͻ Ɔno Nyankopͻn anim. Ampaara sɛ Onyankopͻn na Wͻte nsɛm nyinaa, Ɔhunu adeɛ nyinaa na Ɔnim adeɛ a ɛwͻ akoma mu.Ɛnti obiara nni hͻ a wͻbɛtumi adaadaa No. Onyankopͻn boa wͻ aberɛ a agyidifoͻ no Jama’at bɛto aba wͻ mpaebͻ akyi wͻ saa wei so sɛ wͻbɛyi nkurͻfoͻ a wͻma wͻn dibrɛ no.
Ɛyɛ yɛn Jama’at no nhyehyɛeɛ sɛ yɛbɛbͻ mpaeɛ ansaana yɛayͻ biribiara, na abatoͻ nso no yɛ mpaebͻ akyi. Abatoͻ ho nhyehyɛeɛ a yɛyͻ no wͻ atuhoama mu no Onyankopͻn hyira so. Ɛwͻ sɛ yɛto aba na yɛ ma yɛ ho so wͻ nkutahodie mu. Wͻn a wakyɛre wͻ ɛsom no mu nim wei nyinaa na afoforͻ ne mmͻfra a wͻwͻ Jama’at no mu no nso ɛwͻ sɛ wͻnom hunu. Abatoͻ no yɛ ɛkwan a yɛredi obi ho adanseɛ; na deɛ ɛtwatoͻ no Khalifa a ɛwͻ hͻ saa aberɛ no ͻyɛ. Ɛtͻ da a ɛwͻ mu sɛ obi anya mma no mu bebiree, nso wͻde dibrɛ no ma obi foforͻ. Ɛwͻ sɛ yɛhunu no pefee sɛ Ameer a ͻwͻ ͻman bi mu no wͻ ho kwan sɛ ͻma dibrɛ wͻ Jama’at nketewa no mu na ͻsan wͻ ho kwan sɛ ͻyi obi a wͻnyaa mma no mu kakraa bi. Enti ɛwͻ sɛ Ameerfoͻ no a wͻwͻ aman ahodoͻ so no bum ma no mu dodoͻ no ara. U.K ne Europe aman so, USA Canada ne Australia no nhunu sɛ nsesaeɛ ma Ameer no ho kwan sɛ ͻyi obiara ma deɛ wͻnyaa mma no mu dodoͻ no, wͻ saa afe wei mu abatoͻ no, sɛ ɛyɛ wͻnom pɛ sɛ wͻyͻ nsesaeɛ a, ɛwͻ sɛ wͻde kͻ Hadhrat Khalifatul Masih hͻ na ͻma wͻn kwan. Na Pakistan ne India no bɛtumi akͻ so wͻ mantamu te sɛ deɛ ɛmmera ma ho kwan no. Amilafoͻ a wͻyi wͻn wͻ ͻman biara mu no, ɛkwan biara so no Khalifa a ͻwͻ hͻ saa berɛ no ɛwͻ sɛ wͻgye wͻn to mu.
Kyɛfa no ka sɛ, “Wͻde ahyɛ mo nsa no ma awuranom a ɛyɛ wͻn dea na ɛfata wͻn”, na wei nso fa wͻnom a wͻama wͻn dibrɛ no nso. Yɛyi nkurͻfoͻ sɛ ɛtia sɛ yɛyi wͻn wͻ dibrɛ bi ne adwuma titri bi. Mfatoho ne deɛ wͻda Rishta Nata ano ne adwuma foforͻ yɛde ma nipa afoforͻ wͻ mea bi. Sɛ yɛreyi nkurͻfoͻ ama wͻn dibrɛ a nni kwan sɛ Ameer ne Sadrfoͻ no di nkurͻfoͻ a wͻnom pɛ ne wͻn a wͻne wͻn wͻ nkutahodie no akyi. Na ɛwͻ sɛ wͻnom hwɛ nkurͻfoͻ a wͻwͻ Jama’at no mu yie na wͻyi deɛ ͻdi mu wͻ wͻn mu, annyɛ saa a ɛbɛyɛ sɛ y’ama wͻn a wͻfiri yɛn ase no dibrɛ bi ɛfiri sɛ wͻfiri n’abusua mu anaasɛ ͻyɛ n’adamfo. Enti ͻrema no dibrɛ no wͻ mfaso deɛ nti a, wͻnom a ɛwͻ wͻn mu sɛ wͻka biibi no, wͻka adeɛ a ɛmfa mfasoͻ mma. Wͻn ntwe wͻn ho mfiri ho. Ɛnyɛ bͻne sɛ wͻbɛbɛn Ameer anaasɛ obi a ͻwͻ dibrɛ na ɛnni kwan sɛ obi gyae sɛ wͻbɛsom Jama’at no wͻ wei ho nti. Asɛm wei ada adi pefee ɛfiri sɛ nkurͻfoͻ bebireee apagya saa asɛm yi.
Onyankopͻn ka no wͻ kyɛfa no mu sɛ “sɛ mobu atɛn a momfa pɛpɛɛpɛyͻ mmu atɛn tenenee”. Sɛ yɛyɛ pɛsɛmenkomenya ne ahummͻborͻ a yɛntumi nnyɛ pɛpɛɛpɛyͻ na yɛbɛhwere nhyira. Ɛwͻ sɛ wͻn a wͻwͻ dibrɛ no de pɛpɛɛpɛyͻ yɛ adwuma na sɛdeɛ ɛfa ma Jama’atfoͻ no nyinaa. Ɛnni kwan sɛ, sɛ obi yɛ nipa asomasi adamfo anaa sɛ wͻfiri abusua wei ne wei mu nti yɛayɛ nhyehyɛeɛ soronko ama no na y’ayɛ deɛ ɛne no bͻ abira ama afoforͻ a w’aka no. Saa tebea wei de tebea foforͻ ba Jama’at no mu. Sɛ Khalifa a ͻwͻ hͻ no busa biibi a ɛwͻ sɛ yɛde nokorɛ no kͻma no ɛfiri sɛ w’ahyɛ yɛn sɛ mobu atɛn a monfa pɛpɛɛpɛyͻ mmu atɛn tenenee. Sɛ yammfa nokorɛ no annkͻma no a ɛbɛtumi aba sɛ ͻbɛtu anamͻn bi a ɛnnyɛ a ɛnam sɛ ͻnnim nti no w’ayɛ bͻne ɛfiri sɛ wͻanka nokorɛ no ankyerɛ no. Adwuma ne adeɛ biara a wͻde ahyɛ obi nsa no ɛwͻ sɛ ͻyɛ no wͻ adwene ne nokorɛ mu. Sɛ yɛma wo dibrɛ bi a, ɛmma wͻnnyͻ kɛseɛ na mmom ɛyɛ adwuma kɛseɛ a ɛwͻ sɛ yɛbͻ mpaeɛ na yɛtumi ayͻ. Onyankopͻn aka sɛ, Ɔno na Ɔte adeɛ nyinaa na Ɔhunu adeɛ nyinaa nso, Ɔtie mpaebͻ ɛnkanka aberɛ a mpaebͻ no ba soro sɛdeɛ Ne mmra nsɛm sitieɛ no.
Te sɛ deɛ Onyankopͻn hwɛ deɛ ͻreto aba no yie. Na Ɔsan hwɛ wͻn a wͻwͻ dibrɛ no nso. Sɛ wͻn a wͻwͻ dibrɛ no annyɛ pɛpɛɛpɛyͻ a, Onyankopͻn ka sɛ wͻbɛbu wͻn akonta. Ɛyɛ adeɛ a ɛwͻ sɛ obiara fa ho wͻnom a w’ama wͻ adwuma biara no. Ɛyɛ nkurͻfoͻ bi pɛ sɛ anka wͻnya dibrɛ. Sɛ wͻn nim asodie kɛseɛ a ɛwͻ mu anaasɛ wotͻ animonyam bi mu no ɛtumi twetwe Onyankopͻn abufuo, dodoͻ kyɛn afoforͻ. Obiara a ͻwͻ dibrɛ no anyumerɛ anaasɛ adekyeɛ no ɛwͻ sɛ wͻsrɛ bͻnefakyɛ. Ɛwͻ sɛ obiara a ͻwͻ dibrɛ biara no hunu sɛ sɛ wͻto aba yi no na sɛ wͻgye no to mu wie a na ne ho ntͻͻ no. ampaara sɛ w’ahyɛ no sɛ ͻbɛyere ne ho ayɛ adwuma ama Jama’at no na sɛ w’annyͻ a ɛbɛtumi atwetwe Onyankopͻn abufuo aba ne so. Ɛwɛ sɛ wͻn a wͻwͻ dibrɛ no yɛ obiara a ͻwͻ Jama’at no mu asɛdeɛ ma no na afei ͻbɛgyegye ɛtoͻ ɛfiri wͻn hͻ. Ɛwͻ sɛ wͻnom a wͻwͻ dibrɛ no hunu sɛ wͻn dibrɛ no ɛnha Jamma’at no wͻ kwan bͻne biara so na ɛnseɛ ne din ɛnso.
Ɛwͻ sɛ yɛde y’ani bu ebinom na wͻyɛ nhwɛsoͻ ma yɛn na y’atumi ayɛ ɛsom no adwuma ne saa ewiase wei ɛnso. Yɛnntumi ɛnka sɛ adeɛ bi yɛ onipa baako nkoara asɛm, na ɛmmfa Jama’at no ho ne obi wͻ ho kwan sɛ ͻyͻ deɛ ͻpɛ. Ɛwͻ sɛ obiara a ͻwͻ dibrɛ no te aseɛ sɛ w’ahyɛ no sɛ ͻnyɛ deɛ Jama’at no pɛ wͻ kwan biara so, ɛwͻ sɛ obiara a ͻwͻ dibrɛ biara no hunu wei na nkurͻfoͻ ɛni saa kwan wei so na wͻn to aba. Wͻ asɛm foforͻ mu no, ɛwͻ sɛ yɛto aba ma wͻn a wͻwͻ Nyame suro a ɛwͻ soro paa. Sɛ yɛka sɛ y’agye ͻkandini a ͻwͻ hͻ saa ɛmmerɛ wei mu no adi a, wͻn apagya yɛn Nyamesuro (Taqwa) gyinaberɛ na yɛ san yɛ deɛ yɛn werɛ hyɛ mu no sene obiara, ndeɛ na yɛn asɛdeɛ a yɛwͻ no wͻ Jama’at no mu no, na anyɛ no yie wͻ yɛn pɛ mu. Nyankopͻn aka no wͻ Kur’aan no mu sɛ, “Ɛne nkurͻfoͻ no a wͻyɛ ahwɛyie wͻ awowasideɛ ne wͻn apam ho na wͻde ne Wura adeɛ san ma no” (23:9). Ɛwͻ sɛ obiara ani kͻ saa mmra nsɛm yi so. Eni ho kwan sɛ yɛtoto awerɛhyie mu ase koraa. Ɛwͻ sɛ obiara yɛ n’asɛdeɛ ma no di mu wͻ akoma pa kwan so. Wͻn a yɛbɛyi wͻn ama w’adi yɛn anim no, ɛwͻ sɛ wͻn keka wͻn ho wͻ wͻn adwumayͻ mu na afei nso wͻn a yɛn ayi wͻn no ɛwͻ sɛ wͻyͻ wͻn adwuma no yie.Ɛyɛ wͻn a wͻkuta dibrɛ no na ɛwͻ sɛ wͻyi awqiase gyidie firi wͻn akwan mu sene obiara. Atia Islam mkyerɛkyerɛ sɛ obi bɛpere dibrɛ. Na mmom sɛ obi pɛ sɛ ͻboa anaa yɛde adwuma hyɛ obi nsa a, ndeɛ ɛwͻ sɛ yɛhunu sɛ yɛn asɛdeɛ no ntumi nwie pɛyͻ gyesɛ yɛhyɛ yɛn apam anaa bͻhyɛ no ma.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) kasafa sɛnea yɛ tumi hyɛ yɛn bͻhyɛ anaa apam no ma. Nyankopͻn Kokroko No aka no wͻ kyɛfa yi mu sɛ, “Na wͻn a wͻyɛ ahwɛyie wͻ awowasiseɛ ne wͻn apam ho na wͻde san ma no”. Wͻn a wͻn nni nimdeɛ a wͻde bɛdi wͻn apɛdeɛ so no (Nafse Ammarah). “Suban a ɛde bͻne ba” na wͻdi nkunim wͻ wͻn atenka. Ɛfiri sɛ wͻ bͻ mmͻden sɛ wͻbedi wͻn asɛdeɛ ne Nyame apam ne n’abͻdeɛ so na wͻdi Nyamesuro akwan so. Wͻn fa saa kwan yi so sɛdeɛ wͻn bɛtumi. Asɛm “Ra’oon” (apam)wͻ kyɛfa no mu yɛaka wͻ Arabic kasa mu no, ɛkyerɛ sɛ, sɛ obi fa kwan tenenee so wͻ deɛ ͻbɛtumi ayͻ na ͻpɛ sɛ ͻyͻ n’asɛdeɛ wͻ mmerɛ tiawa biara mu na ͻmpɛ sɛ ͻbɛgya biribiara akyire. Enti, saa kyɛfa yi kyerɛ sɛ, agyidifoͻ di nyamesuro kwan so wͻ deɛ wͻn bɛtumi ayͻ biara na afei wͻn mpɛsɛ wͻbɛgyae wͻn asɛdeɛ a ɛfa gyidie ne apam ho na wͻ pɛ sɛ wͻbɛyɛ nipa asɛdeɛ ama wͻn. Wͻn ani ngye pii, ɛnam sɛ wͻn hunu wͻn ho sɛ wͻn yɛ nokorɛfoͻ ne pɛpɛɛpɛyͻfoͻ.
Wͻntoa so sɛ wͻbɛda wͻn asɛdeɛ adi wͻ kwan biara so mpo wͻn nhwɛ sɛ ɛbɛha wͻn anaa wͻn ntumi nyͻ anaa. Wei ne Nyamesuro. Ne tiawa no, wei ne agyidifoͻ a wͻn ntwee wͻn ho mfirii wͻn asɛdeɛ ho, sɛ wͻn rebu Nyankopͻn ne nipa. Ɛhia ma sɛ wͻn suro, nanso yɛbͻ wͻn soboͻ. Na afewi Nyame ani so no, wͻn hwɛ wͻn bͻhyɛ ne wͻn apam so yuie. Wͻn nto wͻn bͻhyɛ ne wͻn apam agyaegyae mu na afei nso wͻn toa so hwɛ wͻn tenaberɛ a esua koraa wͻ Nyamesuro kwan so ɛfiri sɛ wͻn wͻ suro bi sɛ wͻn bɛtwe fwͻnho afiri wͻn bͻhyɛ ho. Wͻn de dibrɛ a Nyame de ama wͻn no yͻ adwuma, sɛ ebia wͻn ntotoeɛ, wͻn ano, wͻn nkwa, wͻn agyapadeɛ ne wͻn anideɛ ne deɛ ekeka ho wͻ deɛ wͻn ahoͻden bɛtumi, a Nyame suro ka ho ne ahwɛyie ne ne mmrɛ a ɛsɛ mu.
Wͻ bͻ wͻn ho mmͻden sɛ wͻbɛyɛ pɛpɛɛpɛ na kwan biara so no wͻbͻ wͻn ho mmͻden sɛ wͻbɛtumi ahyɛ bͻhyɛ fa wͻn ne Nyame ahyɛ no ma wͻ berɛ a wͻn anyɛ gyidie no, ne nhwɛsoͻ no,kwan biaa wͻbɛtumi ayͻ no, wͻn de Nyamesuro yͻ adwuma wͻ dibrɛ biara nipa wͻ anaa nsɛm bi a ɛmma dibrɛ nni mu. Sɛ ntͻkwa sͻre a, wͻn siesie no wͻ Nyamesuro kwan so, mpo sɛ nsiesie no yɛ ͻhaw ma wͻn a.(Nkyerɛmu wͻ Tafseer Kuraan mu a Bͻhyɛ Messiah (ANN) no atwerɛ Vol III, Pg.366-367).
Onipa Nyamesuro ni ne sɛ wͻbɛ nante wͻ kwan pa so ne Nyamesuro kwan so. Wei ne neɛma a ɛda Nyamesuro adi. Ɛyɛ den sɛ, yɛbɛyɛ Nyame asɛdeɛ no, na yɛbɛhyɛ N’apam ne gyidie ma no, na yɛde yɛn ahiadeɛ ne yɛn ano bɛyͻ adwuma no, tre sɛ ani ne aso ne nsa ne nan ne deɛ aka no, ne deɛ ɛwͻ akyire no te sɛ yɛn adwene ne yɛn botaeɛ a adi mu, wͻ kwan pa so na yɛbɛsi ano sɛ ɛmma mmerɛ ɛnsɛ mfata mu. Na ɛbɛbͻ yɛn kͻkͻ afiri bͻne a ɛbɛba yɛn so no na yɛbɛ dwene yɛn nua faahodie no, yɛ kwan a yɛde da suban pa adi. Nyankopͻn akyerɛ no wͻ Kuraan mu sɛ, ahotee yɛ ahotͻsoͻ. “Libas-ut-taqwa” yɛ nsɛm a ɛwͻ Kuraan no mu. Wei yɛ nkyerɛkyerɛ ma nipa suban pa na yɛbɛtumi anya yɛn kraa ahonya wͻ ahoteɛ kwan so. Ahoteɛ kyerɛ sɛ, ɛwͻ sɛ, obiara yɛ ahwɛyie mpo sɛ ɛyɛ sunsum mu dibrɛ anaa apam a ɛsua mpo na onipa biara bͻhyɛ ne ne n’apam, sɛ ɛbɛyɛ yie nkoaa deɛ a. Ɛne sɛ, ɛwͻ sɛ yɛbͻ mmͻden hyɛ ma wͻ deɛ yɛn ahoͻden bɛtumi biara, asɛdeɛ no nyinaa mmerɛ biara mu’ [Brahin-e-Ahmadiyya, Part V, Ruhani Khaza’in, vol. 21, pp. 209-210 – Essence of Islam, Vol. I. pp. 347 - 348].
Gyesɛ Nyame suro no mpɛnpɛnsoͻ no wͻ soro, ne dibrɛ ne apam no Nyame ne nipa a yɛntumi ntua. Wͻn a wͻkuta dibrɛ no yɛ wͻn a yɛgye wͻn die. Hadhrat Khalifatul Masih twee Jama’at adwene sii so sɛ wͻn mbͻ mpaeɛ na wͻn nyi wͻn a wͻbɛtumi ayͻ wͻn adwuma yie. Wei no, ɛwͻ sɛ obiara Nyamesuro gyinabrɛ na afei nso obiara hia nsakraeɛ na wͻn atu mpͻn wͻ Nyame suro mu. Jama’at no yi wͻn a wͻkuta dibrɛ no firi wͻn mu. Deɛ adi soͻ yin w neɛma pa a wͻn a wͻkuta dibrɛ ne agyidifoͻ no hia. Yɛredi yɛn apam so: sɛ wei no mpɛnpɛnsoͻ no wͻ soro wͻ Jama’at no mu a, ɛbɛwͻ soro wͻ wͻn a wͻkuta dibrɛ no nso. Nipa nya ne ho wͻ berɛ a yɛdi yɛn apam so. Bͻhyɛ Messiah (ANN) no akyerɛ yɛn sɛ, ɛwͻ sɛ yɛma amanfoͻ faahodie mpo sɛ ɛwͻ sɛ yɛfa ͻhaw mu a. Islam yɛ asomdwoeɛ somm mpo, ɛde nhyehyeɛ pa gu akwan so wͻ asomdwoeɛ kwan so, ɛyɛ saa a sɛ yɛbɛbu yɛn apam so ne basabasa asetrɛ wͻ Muslimfoͻ no mu. Wei nso nya nsunswansoͻ wͻ yɛn Ahmadiyyafoͻ so. Apam a ɛwͻ sɛ yɛhyɛ ne ma na yɛbuo no nyɛ dwa die. Na mmom awareɛ nso yɛ apam ne nkabͻmu nanso nipa binom daadaa ebinom wͻ wͻn fie nsɛm mu. Hadhrat Khalifatul Masih aka sɛ, w’aka da sɛ, amanfoͻ bi wͻ hͻ a wͻyɛ Jama’at no adwuma yie nanso wͻnnyɛwͻn abusuafoͻ asɛdeɛ. Wei ne apam so buo na ɛsan yɛ asotweɛ wͻ Nyame ano so. Nyankopͻn aka sɛ, “Na yɛbɛbusa apam no ho asɛm” (17:35). Nyankopͻn akyerɛ nsɛnkyerɛne a ɛwͻ ahoteefoͻ ho sɛ, ….Na wͻn a wͻdi wͻn bͻhyɛ so wͻ berɛ a w’ahyɛ bi no…(2:178). Sɛ Ahmadiyyafoͻ pɛ sɛ wͻyi ahoteefoͻ wͻ dibrɛ mu a, ɛwͻ sɛ wͻhunu sɛ deɛ wͻsi fa di wͻn apam so.
Yɛaka sɛ, ansa na wode asomdwoeɛ bɛba kuro mu no, gyesɛ wo dwene amanfoͻ sintͻ ho. Na yɛaka sɛ, …..“Na mma mommfa ntwatosoͻ nntoto mo ankasa mo nkurͻfoͻ so, nanso mma mommfa atwetwe-din nnsere sere mo ho”…(49:12). Arabic kasafua a ɛkyerɛ ntwatosoͻ no wͻ nkyerɛaseɛ pii mu. Ɛsan kyerɛ sɛ pea si nkyɛn, sɛ wobɛpɛ mfomsoͻ afiri obi ho anaasɛ wobɛka kasa fin de ɛtia obi a ɛyɛ akoma-te asɛm. Yɛhunu sɛ, wͻn a wͻkuta dsibrɛ no nhyɛ wͻn ho so na wͻsan tiatia wͻn a wͻbɛn wͻn no faahodie so, ebi nso wͻ hͻ a wͻn mfɛfoͻ. Esi pi sɛ, wͻn a wͻn gyidie swa no nnsͻre ntia wͻn a wͻkuta dibrɛ no nkoaa, na mmom wͻn amammuo wͻ Jama’at no ho. Sɛ wͻn a wͻkuta dibrɛ no annya ahwɛyie a ɛbɛma wͻn nkurͻfoͻ no a wͻn yɛ wͻn saa no anya tema foforͻ bi afa wͻn a wͻkuta dibrɛ ne Jama’at no ho. Saa kyɛfa yi twe y’adwene ba so sɛ, mma yɛnto nkurͻfoͻ atwetwe-din anaa edin a wͻn mmpɛ na yɛde anideɛ bɛma obiara. Wei ne ahyɛnsodeɛ a ɛwͻsɛ wͻn a wͻkuta dibrɛ no nya. Ɛwͻ mu sɛ, wei kͻ ma Ogyidini biara nanso ɛwͻ sɛ wͻn a wͻwͻ dibrɛ no ani kͻ ho yie.
Deɛ ɛsɛ sɛ dibrɛfoͻ no yͻ no bi ne sɛ, wͻbɛhye Jama’at sika wͻ kwan pa so. Ɛwͻ mu sɛ nkorabata bi tesɛ Ziafat, Langar ne Jalsa Salana nso sɛe sika nanso ɛwͻ sɛ wͻn a wͻdeda saa nkorabata yi ano no yɛ ahwɛyie. Wͻnyͻ nsusueɛ na wͻnfa sika kakraabi nyɛ adwuma. Wei ne kwan papa a wͻfa so yͻ adwuma. Sika a ɛbɛba Jama’at yi mu no annha Bͻhyɛ Messiah (ANN) no sɛ wͻn a wͻbɛhwɛ so no bɛhwɛ so yie. Deɛ ɛsɛ sɛ dibrɛfoͻ yi yͻ bi ne sɛ, wͻbɛtwe wͻho afiri deɛ nnhia ho. Ampaara sɛ, wei yɛ Ogyidini biara asɛdeɛ deɛ nanso mpanimfoͻ no yɛ nhwɛso pa. Onyankopͻn se; ne wͻn a wͻbra deɛ nfata (23:4). Ne saa nti, ɛwͻ sɛ agyidifoͻ mapa no gyinabrɛ kͻ soro. Nsɛ sɛ wͻkeka kasafi na afei nso ma wͻnka wͻho nkͻ bea a wͻnnkyerɛ obuo. Ɛtͻ da nso a, wͻn a wͻwͻ dibrɛ no nso hyia ka nkurͻfoͻ ho nsɛm si wͻn atwetwe. Ɛsɛ sɛ wͻgyae wei nso. Dibrɛfoͻ no nso nntwe wͻnho nfiri nhyiamu a wͻmmu Nyamesom nkyerɛkyerɛ ho.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no kaa sɛ, Ogyidini ne obi a ͻtwe neho firi nwuma bͻne ho na wei yɛ ͻkwan a yɛbɛtumi abɛn Onyankopͻn. Otumfoͻ Nyankopͻn aka sɛ, obi a ͻyɛ pɛpɛɛ ntumi nyɛ ogyidini. Wͻn a wͻwͻ dibrɛ no nsɛe sika wͻ ͻkwan papa so na ɛmom mma wͻnyͻ pɛpɛɛ. Wͻnsɛe sika wͻ merɛ ne baabi a ɛfata. Nni kwan sɛ obi yɛ ho pɛpɛɛ. Ɛsɛ sɛ wͻn a wͻwͻ dibrɛ no nso hyɛ wͻnho so wͻ abufuo merɛ mu. Wͻatwerɛ sɛ, …..“Wͻn a wͻhyɛ wͻn abufuo so……(3:135). Ɛtͻ da a, wͻkyerɛ abufuo ma nsakraeɛ ba Jama’at nsɛm bi mu, nanso ɛwͻ sɛ wͻhyɛ wͻn abufuo so. Obi a ͻwͻ dibrɛ biara nni kwan sɛ ͻkyerɛ abufuo wͻ ͻkwan biara so. Wͻnkae sɛ Kur’aan Kronkron no aka sɛ, …..“Monkasa nkyerɛ nnipa wͻ kwan pa so…” (2:84). Sɛ wͻdi wei so a, nkurͻfoͻ a wͻbͻ dibrɛfoͻ kwaadu no bɛgyae.
Ɛsɛ sɛ wͻn a wͻwͻ dibrɛ no ne wͻn adwumayɛfoͻ nkaeɛ no tena asetena pa mu. Nni kwan sɛ wͻn asetena kͻyͻ tesɛ wiase mu atitiriw ne wͻn adwumayɛfoͻ. Sɛ obi yͻ nfomsoͻ a, ɛsɛ sɛ wͻkyerɛ no mu wͻ kwan pa so. Mma wͻnyͻ wͻntwiwantwi biara. Ampaara sɛ, sɛ obi nyɛ aso mma noͻma bi a, ɛsɛ sɛ wͻdi ho dwuma sɛ ehia a wͻmͻ no kwaadu. Nni kwan sɛ, wͻyɛ nyiyimu biara. Ɛsɛ sɛ dibrɛfoͻ no de obuo ma ahͻhoͻ. Ɛwͻ sɛ wͻgye obiara a ͻbɛba wͻn asoeɛ wͻ obuo mu na wͻma no akonwa; wei yɛ adehia paa. Ɛwͻ sɛ wͻsͻre na wͻkyea ahͻhoͻ. Ɛwͻ sɛ obiara kyerɛ saa anidie yi na wei kyerɛ obuo na ɛnnte obuo so.
Ahobraseɛ yɛ suban a ɛsɛ sɛ Ahmadiyyani biara yͻ;titiriw wͻn a wͻwͻ dibrɛ no. Kur’aan no aka sɛ, “Na mma monnante wͻ asaase no mu ntɛm so…” (17:38). Onyankopͻn npɛ ahomasoͻ wͻ nipa hunu mu. Nti Onyankopͻn mpo mmpɛ sɛ obi a ͻyɛ adwuma wͻ Ne kwan so bɛyͻ ahomasoͻ. Obiara a ͻwͻ saa dibrɛ yi nfa saa asɛm yi nyɛ adwuma. Adeɛ baako a ehia ma titiriw wͻn a wͻde adwuma ahodoͻ ahyɛ wͻnsa bi tesɛ, wͻn a wͻtoatoa adwene ne wͻn a wͻhwɛ afutusɛm so, tesɛ Islahi badwakuo anaa Qadha asoeɛ no, sɛ wͻnkae Onyankopͻn ahyɛdeɛ wei …..“Monyɛ pɛpɛɛpɛyͻ, ɛno na ɛbɛn teneneeyͻ….” (5:9). Sɛ wͻyͻ nhyehyɛeɛ biara a, ɛsɛ sɛ wͻgyina Nyankopͻn ahyɛdeɛ so na ͻyͻ. Qazis adwene nkͻ wei ho yie paa. Baabiara a ahiafoͻ ne ahokyerefoͻ wͻ biara, ɛsɛ sɛ Jama’at hwɛ wͻn. Ɛyɛ Ameerfoͻ ne dibrɛfoͻ no asɛdeɛ sɛ wͻde ahodeɛ a ɛwͻ hͻ no bɛhwɛ wͻn. Ne saa nti, nnyɛ sɛ wͻbisaaeɛ ara na wͻadi ho dwuma na mmom ɛwͻ sɛ wͻhwɛ gyinabrɛ no.
Asodie kɛseɛ a ɛda Ameer ne Sadr biara ne wͻn a wͻwͻ dibrɛ so ne sɛ; …..‘Montwe nipa nkͻ papa ho na momra bͻne….’(3:111). Yɛnfa wei nto y’adwene mu daa nyinaa. Ampaara sɛ, yɛbɛtumi adi wei so a, gyesɛ obiara di ne nsɛm so na wͻbͻ bra pa, na wͻkyerɛ ͻdͻ na wͻyɛ Nyamesuro na wͻhwehwɛ Taqwa n’akwan no a Onyankopͻn akyerɛ yɛn no. Bͻhyɛ Messiah (ANN) no aka sɛ, Taqwa no nnkyerɛ sɛ wͻbɛgyae bͻne kakraabi na wͻayͻ papa kakra. Na mmom Taqwa no ne sɛ, wͻbɛgyae bͻne biara na wͻayͻ papa ahodoͻ nyinaa.
Awieɛ no, Hadhrat Khalifatul Masih kaa sɛ; Wei ne noͻma a ɛsɛ sɛ yɛyͻ na y’atumi ayɛ wͻn a wͻkyerɛ papa na wͻbra bͻne na y’ahyɛ yɛn bͻhyɛ ma. Otumfoͻ Nyankopͻn moa wͻn a wͻwͻ Jama’at yi mu ne wͻn a wͻwͻ dibrɛ wͻ mu, wͻn a wͻato aba ayi wͻn ne wͻn a afei na wͻrebɛyi wͻn, ne me nso na yɛntumi nhyɛ yɛn bͻhyɛ ma.